Sina pp boaty fihodinam-bokatra miaraka amina mpamokatra sy mpamatsy | Sihai
Ny boaty boaty pp hollow koa dia azo ampiasaina amin'ny indostria maro, toy ny fonosana, fandefasana, boaty fiovana, fitehirizana, trano fitehirizana, fandefasana vokatra sns. Ny boaty fanamafisam-peo pp mety ho ESD boaty sy boaty conductive ihany koa, be mpampiasa amin'ny fitaovana elektronika, vokatra elektronika, fivarotana ampahany elektronika, faritra an-tariby sy fandefasana sy fizarana fiara.
Ny boaty turnover mihombo arakaraka ny fitakian'ny mpampiasa dia azo amboarina amin'ny famaritana isan-karazany, habe, firakotra firakotra alimina, azo sakanana, tsy misy vovoka, bika tsara tarehy sy malala-tanana. Ny boaty fihodinan'ny takelaka pp dia tsy misy poizina, tsy misy tsirony, tsy voahozin'ny hamandoana, tsy tantera-drano, fanoherana ny harafesina, lanja maivana, mateza, azo stackable, endrika tsara tarehy, loko manankarena, madio, azo averina, fiarovana ny tontolo iainana, tsy misy loto sy toetra hafa.
Ny tombony azo amin'ny "boaty fiovana" dia tokony ho fantatry ny rehetra. Izy io dia sariaka tontolo iainana, maharitra, ara-toekarena ary mety. Noho izany, ny boaty famindrana dia tsy azo sarahina amin'ny lojika sy indostria manan-danja hafa ao amin'ny fireneko. Misy karazany maro ny akora am-pamokarana, ary ny mahazatra dia ny poakaty PP. Ny fitaovan'ny tabilao.
Ny vokatra biôlôgy mahazatra dia manana tombony amin'ny famonoana rano, hamandoana, hanohitra ny harafesina, fanetsiketsehana, lanja maivana, sns. Amin'ny ankapobeny, tsy misy ny lesoka. Raha tsy mila vokatra na boaty mihoatra ny haben'ny enta-mavesatra ao amin'ny boaty famindrana poakaty ny mpanjifa, dia nosoloina ny vokatra hafa toy ny (boaty famadihana plastika, boaty fitahirizana) ary ny vokatra hafa, fa ny vidiny dia imbetsaka noho ny hollow zana-kazo. Ankoatr'izay, ny boaty famadihana plastika sy boaty fanangonana dia betsaka ihany koa ny fatiantoka:
Ny boaty famadihana plastika dia antsoina koa hoe boaty famadihana PP na PE. Mety hamaky any avaratra izy ireo na noho ny hafanana ambany amin'ny ririnina. Raha fitaovana matevina ampiasaina amin'ny fanoherana ny hafanana ambany dia mety hampitombo ny lanjan'ny boaty iray manontolo. Ny lanjany dia mahatonga ny mpiasa hahatsapa ho mavesatra amin'ny fitaterana sy ny fikirakirana, ary ny vidin'ny boaty dia ho lafo kokoa aorian'ny fampisondrotana, ary hisy fiatraikany ihany koa amin'ny tombontsoam-bolan'ny tsirairay. Amin'ny ankapobeny, ny tombony azo amin'ny boaty fiovana plastika dia mihoatra ny fatiantoka, ary tena mety ny mampiasa azy. Betsaka ny olona mbola vonona hisafidy boaty fiovana amin'ny fitaovana an'ity fitaovana ity.
Previous: pp tranom-bakoka mitafo
Manaraka: pp fonosana poakaty sosona pad